भूकम्पपीडितका नाममा राजनीति कि लाजनीति ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home बिचार भूकम्पपीडितका नाममा राजनीति कि लाजनीति ?
भूकम्प पीडितका बस्तीमा धमाधम अनुदान सम्झौता भएर बैङ्क खातामा रकम जम्मा भइरहेका बेला संसद्मा गोहीका आँशु बगाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । जसले भूकम्पको छ महिनासम्म पीडितको पालमा पुग्न चाहेन, पुनर्निर्माणको नाममा एउटा ढुङ्गा पनि फोरेन उनीहरू भूकम्प पीडितका नाममा सिंहदरबार र संसद् भवनमा नक्कली आँशु झार्दैछन् तर भूकम्प पीडितहरूले आँशु पुछेर आफ्ना घर आफैँ बनाउन थालिसकेको सम्भवतः सिंहदरबार र संसद् भवनका मान्छेलाई थाहा नहुन सक्छ ।
प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने राजनीतिक अस्त्र भुत्ते भएपछि भूकम्प पीडितलाई नयाँ हतियारका रूपमा साँध लगाउन खोजेको छ । भूकम्प गएदेखि सात महिनासम्म नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो र भूकम्प पीडितले सबैभन्दा पीडा र अपमान खेपेको अबधि पनि त्यही थियो भन्दा काँग्रेसजनको चित्त फाट्न सक्छ तर सत्य तीतो हुन्छ, त्यो अवधिमा केही नभएकै कारण भूकम्पपीडितले राज्यबाट सहुलियत पाउन लामो समय लागेकै हो । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नै ढिला भएकाले त्यसपछिका काम स्वभाविक रूपमा ढिला भए ।
यसबीचमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफैँले पुनर्निर्माण अभियानको आरम्भ गरेपछि भूकम्प प्रभावित बस्तीहरूमा जनता धमाधम आफ्नो घर आफैँ बनाउने अभियानमा छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनेक सिमितता र अड्चन तथा कानुनी झमेलाहरूका बीचबाट सकेसम्म राम्रोसँग काम अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । नेपालमा राम्रो काम गर्दा झन् धेरै लफडा झेल्नुपर्छ । अहिले हतारमा कुनै काम गर्दा भोलि संवैधानिक निकायहरूको फन्दामा परिने डरका कारण सरकारी अधिकारीहरू राजनीतिक वा नागरिक दबाबका भरमा भटाभट फाइलमा सही गर्नेवाला छैनन् । यी विभिन्न कारणले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम सुस्त देखिएको छ ।
प्रमुख विपक्षी अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणप्रति पूर्वाग्रही र आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको छ । सबै भूकम्प पीडितहरूसँग अनुदान सम्झौता सकेर प्राविधिकहरू गाउँ पठाइसकेको अवस्थामा र केही हजारले अनुदान रकम पाइरहेका बेला जिम्मेवार प्रतिपक्ष किन अवरोधमा उत्रियो ? यो प्रश्न सामान्य होइन । पुनर्निर्माणको काम नहुञ्जेल तेह्र महिनासम्म चुपचाप बसेको प्रतिपक्ष काम सुरु हुनासाथ संसद् अवरोध गर्नेसम्मको तहमा उत्रिनुले पुनर्निर्माणको त्रासको लहरो कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकार ढाल्ने राजनीतिक अस्त्र प्रयोग गर्न छाडेर देशको ठूलो पार्टी र जिम्मेवार प्रतिपक्षले भूकम्प प्रभावितको पीडालाई ‘इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ’ शैलीमा अपहरण गर्र्ने पराजित मानसिकता हो ।
प्राधिकरणको भनाइ अनुसार भूकम्प पीडितका लागि प्राविधिकहरू पठाइसकिएको छ । तिनीहरूले सबैले काम थाल्नु प¥यो । एक लाखभन्दा बढी जनासँग अनुदान सम्झौता भइसकेको विवरण पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । तीन हजारभन्दा बढीको पैसा बैङ्कमा जम्मा भइसक्यो । एक मुष्टरूपमा खाता खोल्ने काम बैंङ्कहरूले गरिरहेका छन् । ५८ वटा बैङ्कले अनुदान बाँड्दैछन् । यति ठूलो प्राकृतिक विपत्तिबाट लाखौँ जनता पीडित भएका बेला सबैलाई सोचे जसरी सुविधा पु¥याउनु अवश्य पनि चुनौतीपूर्ण छ तर चुनौती छिचोल्दै प्राधिकरण अघि बढेको छ । प्राधिकरणले अनुदान उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिएको छ । अबको १५ दिनभित्रमा अनुदान सम्झौता गरिसकेका धेरै पीडितले रकम पाउन सक्ने वातावरण बन्छ ।
अवस्था यो हो तर आठ महिना पीडितको पक्षमा कामै नगरी बस्ने अनि सबै प्राधिकरणको थाप्लोमा हालेर कोलाहल गर्नुको के तुक ? फेरि पीडितका पक्षमा चासो र चिन्ता हो भने त यी काम निर्वाध र सहजरूपमा अघि बढाउनका लागि सहयोग गर्ने हो, वातावरण विथोल्ने होइन । बनाउन लाग्नुप¥यो । प्राधिकरणले अवश्यक द्रुतगति लिन नसक्नुमा ऊमात्र होइन, सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडियालगायत पनि दोषी छन् । किनकि उनीहरूमध्ये केहीलाई पुनर्निर्माण होला भन्ने डरले गाँजेको छ ।
सिंहदरबार र संसद् भवनमा भूकम्प पीडितका नाममा सत्ता राजनीतिको खेल सुरु भएका बेला भूकम्प प्रभावित गाउँमा चाहिँ त्यसको छिटा पनि परेको छैन । बरु वर्षे झरीको छिटाले पीडितका चुल्होमा प्रहार गर्न थालेको छ । सिंहदरबारमा आफ्नो नाममा भयङ्कर राजनीति चलिरहेका बेला भूकम्प पीडितहरू आफ्नो बासको जोहो आफैँ गर्दैछन् । पङ्क्तिकार यसै साता साता रामेछापको उत्तरी विकट लेकाली बस्तीमा पुग्दा त्यहाँ धमाधम काठ र ढुङ्गा माटोका चिटिक्क परेका घरहरू ठडिँदै थिए । कतिपयले नयाँ घर बनाएर सरिसकेका छन् । काठमाडौँमा भूकम्प पीडितको नाममा सरकार ढाल्न भइरहेको खेलबारे उनीहरू बेखबर छन् ।
राज्यले दिने भनेको दुई लाख अनुदानको बाटो कुरेर बस्दा अझै समय घर्किने र घर बनाउन फेरि एक वर्ष कुर्नुपर्ने भएकाले उनीहरू गच्छेअनुसार घर बनाउँदैछन् । उनीहरूका विचारमा यो भूकम्प प्रतिरोधी घर हो तर मापदण्डमा पर्छ कि पर्दैन र अनुदान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने धुकचुकमा छन् । हालसम्म पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पीडितहरूसँग सम्झौता गरिसके पनि पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपियाँ पनि सबै ठाउँमा पुग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा वर्षाअघि नै छानोमुनि बस्न पीडित आफैँ जुटेका छन् । अब प्राधिकरणले तत्कालै सबै गाउँ बस्तीमा प्राविधिक पठाएर घर बनाउने जनताको काममा सघाउनुपर्ने देखिन्छ । बनिसकेका घरहरूको मापदण्ड जाँच गरेर सकेसम्म जनतालाई मार नपर्नेगरी दुई लाख अनुदानको भागिदार बनाउनुपर्छ । अत्यावश्यक हुनेले नै घर बनाएका कारण उनीहरूलाई यो भएन वा ऊ भएन भनेर अनुदानबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन । अहिले पीडितको सरोकार मुख्यतः यसमै देखिन्छ । यदि राजनीतिक दलहरूको चिन्ता पीडितका पक्षमा हो भने उनीहरूको यो चिन्ता समन गर्न पो लाग्नुपर्छ तर अहिले केहीले यस्तो हल्ला चलाएका छन् कि, मानौँ जनताका घर सरकारले नै बनाइदिने हो । सरकारले घर नबनाएका कारण जनता पालमुनि वा खुला आकाशमुनि छन् भनेर सहरका ‘पावर एलिट’हरूले राज्यलाई बद्नाम र कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । वास्तवमा एक वर्षको बीचमा भूकम्प पीडितले अनुदान र सहुलियत ऋणभन्दा पनि सरकारको घर बनाउने मापदण्ड र प्राविधिक जनशक्ति पर्खेर बसेका छन्, सरकारले दिने दुई लाखले घर बन्दैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ तर पावर एलिटहरूलाई यो कुरा कसरी थाहा होस् ? करोडौँका महलमा बसेर कल्पना गरेकोभन्दा निकै फरक छ भूकम्प प्रभावित बस्तीको अवस्था । सरकारले केही गरेन भनेर कराउनेहरू गाउँ बस्तीमा गएर जनतासँग सिके हुने हो । पीडितहरूले आफ्नो घर आफैँ बनाउनुपर्छ भन्ने बुझेका छन् ।
भूकम्प प्रभावितहरूको गुनासो, चिन्ता वा चासो निकै थोरै र स्वभाविक छन् – अनुदान रकम कहिलेसम्म पाइने हो प्रस्ट होस् । बनाइसकेका घरले अनुदान पाउनुपर्छ, सरकारले गरेको ढिलाइको सजाय भूकम्प पीडितले पाउनु हुँदैन । नक्कली पीडित बनेर दुई लाख चप्काउन गाउँ पस्नेहरूलाई निगरानी गरियोस् । यी कुरामा गाविस सचिव, दलीय संयन्त्र र प्राधिकरणले खटाएका प्राविधिकहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । यत्ति सरोकारको सम्बोधन गर्दै सरकार र प्राधिकरण अघि बढ्ने हो भने जनता पुनर्निर्माण अभियानमा आफैँ अघि बढिसकेका छन् ।
यतिखेर प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसले अनुदान पाउने सूचीबाट छुट हुनेमा आफ्ना कार्यकर्ताहरू बढी रहेको आरोप लगाएको छ । सूची बनाउने काम विशुद्ध प्राविधिक पक्ष हो र यसमा प्राविधिक त्रुटिका कारण कतिपय वास्तविक पीडितहरूको नाम छुटेको पाइएको छ । हामी रामेछापको सैंपू र दुरागाउँ पुग्दा त्यहाँका वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष र दलका प्रमुख तथा स्थानीय अगुवाकै नाम छुटेको पाइयो । छुटेकाले उजुरी दर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ । नाम छुट्नेमा एमालेका जिल्ला सदस्य, चण्डेश्वरी माविका प्रधानाध्यापक, एमाओवादीका नेता, कार्यकर्ता पनि परेका छन् । यस्तो विषयलाई राजनीतिकरण गर्नुजस्तो लज्जाजनक विषय अरू केही हुनसक्छ ? छुटेका नामका सन्दर्भमा छुद्र राजनीति गर्नुभन्दा उनीहरूलाई न्याय दिनु जिम्मेवार राजनीतिक दलको दायित्व होइन र ? भूकम्प पीडितको कष्ट र पीडा राजनीतिक स्टन्ट बन्न थालेको छ । सरकार ढाल्ने र सरकारको आलोचना गर्ने अस्त्र भूकम्प पीडित बन्नु हुँदैन । किनकि यो राष्ट्रिय समस्या हो ।